မဲဆောက်မြို့ ကုန်တိုက်နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးဈေးပွဲတော် ကျင်းပ - Yangon Media Group
မဲဆောက်မြို့ ကုန်တိုက်နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးဈေးပွဲတော် ကျင်းပ
ထိုင်း နိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ ROBINSON ကုန်တိုက်နှစ်ပတ်လည် အထိမ်း အမှတ်နှင့် Thailand Shopping & Dining Paradise ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ရက်က မဲ ဆောက်မြို့ ROBINSON ကုန် တိုက်အနီးရှိ မြက်ခင်းပြင်၌ ကျင်း ပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တာ့ခ် ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး Mr.Hta Na Yut Pankhan နှင့် တာဝန်ရှိသူ များ၊ ထိုင်းခရီးသွားဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Miss, Su Kyit Tar နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မဲ ဆောက်မြို့ပိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူ များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ မြဝတီ ဘက်မှ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး တေဇာအောင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများလည်း တက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံမြဝတီနဲ့ မဲဆောက် မြို့နှစ်မြို့ချစ်ကြည်ခိုင်မြဲမှု တိုး တက်စေပြီး၊ စီးပွားရေးနဲ့ ခရီး သွားလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စေ ရေးကို ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သလို နှစ်သစ်ကူးတော့မှာဖြစ် တဲ့အတွက် စားသောက်စရာ ဈေး ဆိုင်တွေအပြင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တွေကို ဈေးနှုန်းလျှော့ချရောင်း ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ROBINSON ကုန်တိုက်ကြီး နှစ် ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုပါ ပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပတာဟာ သုံးကြိမ်ရှိ သွားပါပြီ”ဟု တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်းရေး မှူး Mr.Hta Na Yut Pankhan က ပြောသည်။
”ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းကနေ၊ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထိ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဈေး လျှော့ရောင်းပေးပါတယ်။ ဘတ် ၂ဝဝအထက်ဈေးဝယ်ရင် ကံစမ်း မဲလည်းပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ အချိန်ဈေးဝယ်ရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ”ဟု မြဝတီမှ ဈေးလာဝယ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါနှစ်သစ်ကူးအထူး လျှော့ဈေး ဈေးရောင်းပွဲအား ဒီ ဇင်ဘာ ၂၁ရက်မှ ၂၃ရက်ထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် ပေါက်ပြားဖြင့် ဗုံးသီးဟောင်း ခုတ်မိရာမှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား တစ်ဦးေ?
မှုခင်းကြိုတင် ကာကွယ်ရေးစောင့်ကြည့် CCTV ကင်မရာများ တပ်ဆင်
ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့ကို နိုင်/ကျဉ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း AAPP ထုတ်ပြန?
မွန်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်လာဟု ပြည်နယ် ဝန်ကြီးခ
Ariana Grande နဲ့ James Corden တို့ တိုင်တန်းနစ် သီချင်းကို စုံတွဲ သီဆို
ယခင်နှစ် ကြံရာသီက သကြားဈေးကျသဖြင့် ငွေကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ခန့် အရှုံးပေါ်၊ ယခုနှစ်ကြံရာသီ ပျဉ်းမ?